श्रम सहचारीका लागि अंग्रेजी भाषामा कडाइ
अंग्रेजी भाषा तालिमको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर श्रम सहचारी बन्न थालेपछि कडाइ
अंग्रेजी भाषा पढाउने इन्स्टिच्युटबाट ‘अंग्रेजी भाषा राम्रो रहेको’ विवरण उल्लेख गरी प्रमाणपत्र पेस गरेका आधारमा अब कुनै पनि कर्मचारी श्रम सहचारीमा नियुक्त हुन नपाउने भएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कन्सुलर तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार पारेको छ ।
मापदण्डअनुसार अब श्रम सहचारीमा योग्य हुन कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रमअनुसार अंग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुपर्नेछ । मापदण्डअनुसार अंग्रेजी भाषामा आइइएलटिएस टेस्टको पूर्णांक (९ अंक)मध्ये कम्तीमा ५ अंक ल्याउनुपर्नेछ । अर्कोतर्फ टोफेल गर्ने कर्मचारीले पिबिटी–सिबिटी–आइटिबीमध्ये कुनै एक परीक्षामा कम्तीमा क्रमशः ५००, १७३, ६१ अंक ल्याउनुपर्ने गरी मापदण्ड तोकिएको छ । पिटिई परीक्षामा सहभागी हुने कर्मचारीले भने कम्तीमा ३५ अंक नल्याए श्रम सहचारीका लागि अयोग्य बन्नेछन् । मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा दुईवटा कार्यविधि तयार पारेको हो ।
किन कडाइ गर्न लागियो ?
शैक्षिक इन्स्टिच्युटबाट अंग्रेजी भाषासम्बन्धी नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी श्रम सहचारी बन्ने र विदेशमा गइसकेपछि व्यावहारिक रूपमा काम गर्दा भाषागत कमजोरी दोहोरिन थालेपछि मापदण्ड बनाएर कडाइ गर्न लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘विदेश गइसकेपछि सबै डिल अंग्रेजी भाषामै गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, ‘तर कर्मचारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी व्यवहारमा खरो उत्रन नसक्ने घटना दोहोरिएपछि कडाइ गर्न लागिएको हो ।’
८ मुलुकमा श्रम सहचारी
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार अहिले खाडीका ६ तथा दक्षिण कोरिया र मलेसियामा श्रम सहचारीको दरबन्दी छ । कुवेत र ओमनमा श्रम सहचारीको दरबन्दी अहिले खाली छ । नेपालले दक्षिण कोरिया, मलेसिया, ओमन र कुवेतसहित बहराइन, कतार, युएई र साउदी अरबमा श्रम सहचारी रहने व्यवस्था गरेको छ । रिक्त दुई मुलुकमा निर्वाचनपछि श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार ५ हजारभन्दा बढी कामदार कार्यरत मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १ हजारभन्दा बढी महिला कामदार रहेको मुलुकमा महिला श्रम सहचारी नियुक्ति गर्नुपर्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत करिब दुई दर्जन मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय देशमा दूतावास नै स्थापना नभएकाले पनि श्रम सहचारी राख्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
को हुन् श्रम सहचारी ?
श्रम सहचारी भन्नाले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा श्रमसम्बन्धी विषय हेर्न मन्त्रालयबाट खटाइएका उपसचिव तथा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी हुन् । यस पदमा योग्य हुन अवकाशको अवधि दुई वर्ष बाँकी रहेको तथा अधिकृतस्तरको सेवामा प्रवेश गरी कम्तीमा ३ वर्ष काम गरिसकेको हुनुपर्नेछ । साथै विगत एक वर्षदेखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमातहतको कुनै पनि कार्यालयमा काम गरेको हुनुपर्छ ।